फूल लागि समतल - केही प्रत्येक घर आवश्यक
धेरै साधारण मान्छे houseplants को मद्दतले आफ्नो घर सजाउनु गर्छन। पहिलो, यो खिडकी मा केही फूल छ, त्यसपछि संग्रह, ट्यांक स्पेस हरेक सेन्टिमिटरले कब्जा बढ्छ। फूल को बर्तन भुइँमा सेट, समतल, मा टेबल र मंत्रिमंडलों। कुनै पनि मामला, सबै भन्दा महत्वपूर्ण इन्डोर बिरुवाहरु को एक dilution मा - सही दृष्टिकोण। र floriculture सबै बिरुवाहरु को योग्य कवरेज छ। यस मामला मा, उत्पादन एक सुन्दर फूल रैक हुनेछ। यो एक grower अवैतनिक र व्यावसायिक रूपमा एक अपरिहार्य उपकरण हो। यो तत्व संग, तपाईं विकास, विकास र फूल लागि सामान्य अवस्था प्रदान गर्न एकै समयमा बिरुवाहरु को असीमित संख्या गर्न सक्नुहुन्छ।
फूल लागि समतल कुनै पनि विशेष दोकान मा खरिद गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक र धातु, काठ र ग्लास बाट: निर्माता फरक संस्करण यी डिजाइन को विभिन्न मोडेल को एक विशाल विविधता प्रदान।
यो डिजाइन डाटा पहिले नै रंग को नियुक्ति को लागि जस्तै भएनन् छ टिप्पण लायक छ, तिनीहरूले एकदम रोचक भित्री सजावट भएका छन्। रंग लागि आधुनिक फर्नीचर तत्व समतल संग सिर्फ एक फ्रेम, र सारा सिस्टम छैन। तिनीहरूले विकास र इनडोर बिरुवाहरु को विकास को लागि आवश्यक सबै संग सुसज्जित छन्, अक्सर यी मोडेल कृत्रिम सिंचाई, पानी ट्यांकी र थप एक ब्याकलाइटद्वारा सिस्टम समावेश गर्नुहोस्।
अब, फूल लागि रैक खरीद, तपाईं आफ्नो finalization संग कुस्ती छैन। सबै महत्वपूर्ण बोट हेरविचार सामान तिनीहरूले पहिले नै छ। साथै, फर्नीचर कम्पनीहरु उपभोक्ताहरु एक निश्चित आकार र व्यक्तिगत परियोजनाहरूको अक्सर संरचनात्मक डिजाइन, त्यो छ, आदेश प्रस्ताव। यस्तो डिजाइन आफ्नो आवश्यकता ठ्याक्कै अनुरूप हुनेछ, सबै nuances तिनीहरूलाई खाता मा लिइएको गर्न।
तपाईं रंग को एक उपयुक्त रैक पाउन सक्छ भने पनि, तपाईं सधैं यो आफैलाई गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। को भित्री यी तत्व उपलब्ध सामाग्री र उपकरण को कुनै पनि बनाइएका छन्। यो सबै तपाईं फर्नीचर व्यवस्था जाँदैछन् जहाँ कोठा को समग्र डिजाइन मा निर्भर गर्दछ। धेरै राम्रो क्रोम धातु संग फ्रेम सुरक्षा ग्लास को समतल, देख्यो। यसबाहेक, यस मोडेल लागि रूपरेखा पनि एक रूख देखि गर्न सकिन्छ। सम्झना गर्न आवश्यक मात्र कुरा: फूल लागि समतल एक पलिश देखि गर्न सकिन्छ , स्लैब fiberboard यो सामाग्री चिस्यान रुचि छैन हुनाले यसलाई चाँडै दरार र यसको मूल उपस्थिति गुमाउन। राम्रो रुप र डिजाइन संग एक धातु फ्रेम, अंधाधुंध ग्लास र काठ को समतल स्थापित छ।
फूल रैक अर्को फाइदा - यो आफ्नो स्थिरता छ। विपरीत hinged समतल भूमि गर्न बर्तन को वजन अन्तर्गत पर्न सक्ने, यी तत्व भुइँमा दृढ छन्। यस्तो संरचना स्थापना गर्दा प्रदान गरिनु पर्छ भन्ने मात्र कुरा हो - एउटा सानो सुरक्षा फास्टनरों। उहाँले झुकेको र्याक गर्न आवश्यक र अगाडि परे।
पार्टी "Demi": समीक्षा। डेस्क-ट्रांसफर्मर: मूल्य पुस्तिका
जीवित कोठा र बेडरूम लागि सहज फर्नीचर - सोफा "-tock टिकटिक"
आधुनिक सोफा: एक अवलोकन, मोडेल, दृश्य र समीक्षा
असामान्य कुर्सियों: प्रकार, मूल डिजाइन निर्माता र
Chaise बेबी: समीक्षा र सुविधाहरू
घरमा खाना पकाउने: आफ्नो हातमा आइसक्रिम
कसरी मुँहासेको निशान हटाउनुहुन्छ?
थिएटर समारा: जानकारी को अग्रणी थिएटर र आफ्नो मुग्ध पार्ने संगीतको सूची
को CPU overclock कसरी सुझावहरू
सर्भर वंश कसरी सिर्जना गर्न 2
"Holisal" teething: समीक्षा। "Holisal" छोराछोरीलाई लागि: पुस्तिका
कसरी एक दिनमा Murom को ठाँउहरु हेर्न?
एक देश प्रतीक मा इराक झण्डा धेरै परिवर्तनहरू
Dali चित्र: एउटा अवलोकन
राम्रो थ्रिलर्स, गुप्तचर कथाहरू: सूची